Mbido » Akụkọ kacha ọhụrụ » Na -agbasa Akụkọ Mba Nile » Akụkọ Bahamas Breaking » Ihe dị ọhụrụ na Bahamas na Ọktọba
Njem njem • Akụkọ Bahamas Breaking • Na -agbasa Akụkọ Mba Nile • Na-agbasa News Travel • Caribbean • culinary • omenala • Entertainment • Industrylọ Ọrụ Ọbịa • Hotels & Ebe ntụrụndụ • Music • News • Resorts • Agbamakwụkwọ Romance Honeymoons • Ịzụ ahịa • Tourism • Mmelite nke Njem njem
Ọ bụ oge ịde akwụkwọ ịpụ na ọdịda! Ma ị masịrị izu ike n'ụsọ osimiri aja ọcha ma ọ bụ buru njem njem na njem nlegharị anya na-akpali akpali, a na-anabata ndị ọbịa ka ha mara ihe kpatara "ọ ka mma na Bahamas" nwere ụlọ ama ama n'ụwa, ịbawanye elu ụgbọ elu kpọmkwem na ebe nkiri ọhụrụ na mmiri.
Agwaetiti nke Bahamas weghaara ọtụtụ mmeri dị ukwuu gafee ụdị dị iche iche na Njem + Ntụrụndụ nke a na -atụ anya kwa afọ "onyinye kachasị mma nke ụwa".
Ọ natakwara nhọpụta iri abụọ na 20 Caribbean Travelers 'Choice Awards. Online.
Ntuli aka ntanetị maka ntuli aka ndị njem Caribbean na -emechi October 31, 2021.
Bahamas na-enwu enwu site na nnabata ụwa ama ama - Agwaetiti ndị ahụ nwetara ọtụtụ mmeri dị ukwuu n'ofe dị iche iche Njem + Ntụrụndụ kwa afọ a na -atụ anya nke ukwuu "Ihe nrite kacha mma n'ụwa”Ma nata nhọpụta 20 n'ime 2021 Onyinye Nhọrọ Ndị njem Caribbean. Ntuli aka ntanetị maka ntuli aka ndị njem Caribbean na -emechi October 31, 2021.
Ire nke SLS Baha Mar -Onye egwu mmeri Grammy John Legend ga-eme na Ire nke SLS Baha Mar na Nọvemba 5, 2021. Tiketi gụnyere nri mara mma, mmanya na -egbu egbu na iko LVE Rosé. Ndị bịaranụ ga -abụrịrị afọ 18 ma ọ bụ karịa.
United Airlines mara ọkwa Nassau ụgbọ elu nwere ike ịgba akwụkwọ - United Airlines wepụtara Nassau ọrụ Satọdee na -akwụsịghị akwụsị site na ọdụ ụgbọ elu mba ụwa Cleveland Hopkins malite na Disemba 18, 2021. A na -enweta ụgbọ elu iji debe akwụkwọ na mbido Septemba.
Hurricane Hole Superyacht Marina na Paradaịs Paradise amaliteghachiri na 2021 -Site na mgbatị gbasawanyere na arụnyere T-docks mbụ, Ajọ Ifufe Superyacht Marina na -akwado ịnabata ndị ọbịa maka oge ụgbọ mmiri oyi nke 2022. Ndị ọbịa ga-enwe ebe obibi okomoko okomoko, ụlọ ahịa ụwa, nri mara mma na ọtụtụ ihe eji enyere ndụ aka.
Maka ndepụta zuru ezu nke azụmahịa na nchịkọta maka Bahamas, gaa na www.bahamas.com/deals-kpọpu.
Jiri ntụkwasị obi na -eme njem na nkwa akpụkpọ ụkwụ akpụkpọ ụkwụ - Sandals Resorts International na -ewebata Nkwenye ezumike akpụkpọ ụkwụ. Ndị ọbịa na Sandals Royal Bahamian na Emerald Bay nwere ike nweta uru gụnyere ezumike nnọchi na kredit ụgbọ elu, ọnụnọ iche iche anaghị akwụ ụgwọ yana kagbuo n'efu.
Mmekọrịta Ọdịda na-ekpo ọkụ, Style Na-agụnye Ihe niile - Gbaga na agwaetiti Grand Bahama wee chekwaa ihe ruru 40% mgbe ịnọ Lighthouse Pointe na Grand Lucayan Resort. Window njem dị ugbu a ruo Ọktoba 31, 2021.
Jiri ngwugwu Tropic jidesie oge ọkọchị ike –Fall dị ebe a, mana ị ka nwere ike idobe vibes oge ọkọchị mgbe ị na-edobe ọnụnọ abalị abụọ ma ọ bụ atọ na Hilton na Resorts World Bimini. Ihe ngwugwu Tropic na -amalite na $ 508 kwa mmadụ gụnyere njem mkpagharị na Tropic Ocean Airways si Fort Lauderdale. Window ntinye akwụkwọ dị ugbu a ruo Disemba 31, 2021.
Nọrọ ogologo oge na Baha Mar - Ndị ọbịa ezumike na Baha Mar nweta abalị nke anọ n'efu mgbe ị na -edobe ọnụnọ gafee Pọtụfoliyo ụlọ nkwari akụ gụnyere Grand Hyatt, SLS na Rosewood, gbakwunyere kredit $ 100, ịnweta Baha Bay na -akparaghị ókè yana nnwale ngwa ngwa "lọta n'ụlọ".
Hideaway bụ ụbọchị ọzọ - The Ocean Club, A Four Seasons Resort, Bahamas na -enye ndị ọbịa abalị anọ nke ekele na abalị atọ ọ bụla na -akwụ ụgwọ n'otu n'otu, yana njem ụgbọ elu nkeonwe. Window njem dị ugbu a site na Disemba 31, 2022.